Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonaa mawduuca lambarrada Jarmalka. Muxaadarada nambarada Jarmalku waxa badanaa la tusa ardayda dugsiyada hoose ee hadda bilaabaya inay bartaan Jarmalka. Sida aad ogtihiin nambaradu waa tibaaxo ka samaysan tirooyinka min hal ilaa sagaal waxaana loo isticmaalaa in lagu qoro tirooyin. Si kale haddii loo dhigo, mid kasta oo ka mid ah weedhaha 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 waa tiro. 10-11-12-13-14-15-20-30-50-100 iwm. Tibaaxaha sida tirooyinka waa tirooyinka la abuuray iyadoo la isticmaalayo tirooyinka.
Sida aad ogtihiin, Jarmal iyo Turkiba, tirada ugu badan waa 9 (sagaal) tirada ugu yarna waa 0 (eber). Hadda, aan siinno lambarrada Jarmalka muuqaal ahaan si ay ardaydeenna dugsiga hoose u fahmi karaan. Hoos waxaa yaal nambarada Jarmalka laga bilaabo eber ilaa sagaal. Haddii aan si aad ah u diyaarinay, eber ilaa malaayiin, Numbers Jarmal Haddii aad rabto inaad akhrido casharkeena, guji halkan: Numbers Jarmal
Nambarada Jarmalka: 0 NULL
Nambarada Jarmalka: 1 EINS
Nambarada Jarmalka : 2 ZWEI
Nambarada Jarmalka: 3 DREI
Nambarada Jarmalka: 4 VIER
Nambarada Jarmalka: 5 FUNF
Nambarada Jarmalka: 6 SECHS
Nambarada Jarmalka: 7 SIEBEN
Nambarada Jarmalka: 8 ACHT
Nambarada Jarmalka: 9 NEUN
Taasi waa dhammaan lambarrada Jarmalka sharraxaadda mawduuca, saaxiibo. Durba goobtayada waxaa ku yaal duruus badan oo ku saabsan sida loo qoro, loo akhriyo oo loo abuuro tirooyinka Jarmalka eber ilaa malaayiin. Waxaad codsan kartaa koorsooyinka la xiriira. Maadaama aysan jirin wax kale oo lagu xusi karo nambarada Jarmalka, waxaan ku jarnay halkan. Dhammaantiin waxaan idiin rajeyneynaa inaad ku guuleysato casharradiina Jarmalka, waxaanan salaameynaa walaalahayaga qurba-joogta ah ee soo gala boggayaga Jarmalka.
# Jaantusyada Jarmalka
Tags: 10 lambar oo Jarmal ah, 5 lambar oo Jarmal ah, 6 lambar oo Jarmal ah, 7 lambar oo Jarmal ah, 8 lambar oo Jarmal ah, 9 lambar oo Jarmal ah